Tamsa’ina dhibee sombaa hir’isuuf hundi ga’ee isaa ba’achuu qaba jedhame – Fana Broadcasting Corporate
Tamsa’ina dhibee sombaa hir’isuuf hundi ga’ee isaa ba’achuu qaba jedhame
Finfinnee, Eebila 11,2011(FBC)- Tatamsa’ina dhibee sombaa hir’isuuf hojii hojjetamaa jiru milkeessuuf seektaroonni hundi ga’ee isaanii akka bahatan Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa waamicha dhiyeesse.
Guyyaan sombaa addunyaa akka biyyatti yeroo 22ffaan akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Amboottii kabajamee ooleeraa.
Kabaja ayyaanichaarratti kan argaman itti aanaan hogganaa birichaa Dooktar Mangistuu Baqqalaan akka jedhanitti, tatamsa’ina dhibichaa hir’isuuf hojileen hojjetaman jiraatanis xiyyeeffannaan seektaroota biroon kenname gahaa tahuu dhabuu isaatin akka barbaadame bu’a qabeessa tahuu hin dandeenyedha kan jedhan.
Keessattuu kutaalee hawaasaa saaxilamoo tahan akka manneen barnootaa, manneen amala sirreessaa fi imaltoota konkolaataarratti hojjetame qindoomina gahaa dhabuu isaatin dhibeensombaa qorichaan wal bare akka dabaluu isa taasiseera.
Dhibichi immoo hafuuraan kan daddarbu tahuu isaatin seektarri hundi xiyyeeffannaa itti kennuun miira abbummaan hojjechuun gahee irraa eegamu bahachuu qaba jedhaniiru.
Sirna ayyaanaa kanaarratti biirichi, bakka buutonni kutaalee hawaasaa, Biiroon Geejibaa, Koomiishinii Manneen Amala Sirreessaa Oromiyaa fi Biiroon Barnootaa hirmaataniiru.
Yidnaqaachaw Haaylamaariyaamtu gabaase.